De Bruyne oo tooshka ku ifiyay aalada garsoorka caawisa ee VAR, kaddib kulankii Tottenham – Gool FM
(England) 19 Agoosto 2019. Xiddiga kooxda Man City ee Kevin De Bruyne ayaa muujiyay sida uu kaga yaaban yahay aaladda garsoorka caawisa ee VAR oo loo adeegsaday markii ugu horeysay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Garsoore Michael Oliver ayaa diiday gool uu dhaliyay xiddiga reer Brazil ee Gabriel Jesus daqiiqadihii dheeriga ah ee kulankii Tottenham Hotspur, sababa la xiriira in aaladda garsoorka caawisa ee VAR ay sheegtay in kubadda ay ku dhacday gacanta mid ka mid ah ciyaartoyda Skay Blues kahor inta aan goolka la dhalinin.
Haddaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa daabcay wareysi uu bixiyay xiddiga reer Belgian ee Kevin De Bruyne waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ciyaarta kaddib waxaa la ii sheegay in haddii ay kubaddu ku dhici laheyd gacanta xiddig ka tirsan Tottenham, inaan rigoore nalagu abaalmarin laheyn, sidaas darteed haba yaraatee ma jiraan waxaan ka fahmay, waxaan qabaa inay u baahan tahay in laga wada hadlo”.
“Si weyn uma taageersani aaladda garsoorka caawisa ee VAR, haddii aad dooneyso in kubadda cagta aad wanaajiso, ugu horeyntii waa inaad fahantaa, waan ogeyn in goolka dib loo eegayo, sababtoo ah gool walba dib ayaa loo eegaa, sidaas darteed haba yaraatee ma jiraan waxaan ka fahmay, sidoo kale Tottenham ma aysan ogeyn!”.
Si kastaba ha noqotee, Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur ayaa ciyaar xiiso badan ay xalay kuwada dheeleen kulankooda labaad ee horyaalka Premier League xili ciyaareedkan cusub waxay ku soo dhamaatay barbaro 2-2 ah.